WELCOME TO ALLGEDO ONLINE
Allgedo News, October 5, 2008
HADDII AY U DIRIRAYEEN DIINTOODA, HA KALA DAYSTEEN SEEFAHOODA Aan ku hormaro ee uma shaqeeyo mana taageersani wadaaddada jihaadka awgiis dhiigga u daadiya ee Soomaaliyeed. Xaq-u-dirir, gobannimoddoon, Usuuliyiin, mujaahidiin, shabaab, iyo wadaaddo waxaad rabtid ugu yeere, nimanka dhallinyarada u badan oo iyagu Qur’aanka iyo sunnaha suubbanaha isa siiyana wax aan Soomaalinnimada iyo tawxiidka ahayn ma wadaagno. Maantase arrin taariikhi ahaan rabaa in aan iyagana u sheego, geedna ka iraahdo oo fagaare Soomaaliyeed ka sheego.
Waxaa muuqata in markii nimankaa dhallinyarada ah ee muqaawameeyey la loodin waayey oo ay fashiliyeen dawladdii ugu awoodda roonayd bariga Afrika oo ay –waa caddahaye – Libaaxii Geeska sanka dhiigga u geliyeen goomankana u qooyeen oo gulufyo tiro leh ay uga gacan sarreeyeen, in la gaarey arrin waxyaabahaas oo dhan lagu xalliyo. Waxaa soo baxday koobkii ay Itoobbiya qaadday 12/06-dii oo ahaa mid dahabi ah in ay gurigeedii nabad ku geyn weyday, oo inta ay gaal yar iyo mid weyn isugu tageen baa dhallinyaradaa far lagala bixi waayey. Dhinac kale ayaa loo rogay. Suga ayaa la yiri. Dawladdii ku meel-gaarka ahayd ee Soomaaliya oo Imbagathi lagu soo dhisay oo looga fadhiyey in ay noqoto dawlad sida Masar oo kale ilbax u noqota, dabcan gacantana u cuslaysa kuwa asal-raaca ah, ama sida Turki-ga casri u noqota oo aan safaleetiyada u oggolaan jaamacadeheeda, ayaa waxay noqotay af, calool, muran, iyo war-xumo. Waa la walaacay. Waxaa la goostay: In wadaaddada kuwooda
mayalka nugul la soo dhaweeyo, iyaga iyo TFG-na la isku shaandheeyo, dawlad iyo cabinet-na loo sameeyo; dabadeedna idaacado cod dheer iyo saxaafadda caalamkaba laga sheego in Soomaaliya iyo Islaamiyiintii la dagaallamaysay ay heshiiyeen. Wixii berigaa ka dambeeyana ciddii Soomaaliya dagaal ka sii wadda ay tahay argaggixisadii nabad-diidka ahayd. Markaa ka dambe ayaa la doonayaa in la xalaalaysto dhiigga kuwii mayalka adkaa ee runtii dagaalkana meeshan micnaha lehba iyagu soo gaarsiiyey. Waxaa banaatiikhda isu qaadan doona intii ay dadka ku dhihi jireenna (waa gaal, waa riddo, dhiiggiisu waa xalaal, iwm) isku dhihi doona nimankii halgankii aad ogeyd kharaarkiisa wada galay, guushaad aragtayna uu Eebbe ku galladay. Markii ay kuwani – mayalka adagi – meesha ka baxaan, ayaa waxaa loo soo jeesan doonaa wadaaddada mayalka nugul leh. Waxaan marka dhamaantood labada mayalba ku leeyahay: Wadaaddo Soomaaliyeedow: Haddii aad U Dirirayseen Diintiinna, kala Deysta Seefihiinna. Qormadaan waxaan u hibeeyey: Cabdullaahi.
Eebbe ha Ina Waafajiyo